Tales ngoba ingane iminyaka 5. Pushkin sika inganekwane izingane
Zonke izingane, ngaphandle kokukhetha, uthando izindaba. Abazali nothisha ubatshele, imvuthu, imini nobusuku. ezithandwa kakhulu Folk yezinganekwane izingane. Ohlakaniphile ezinhle, bafundisa izingane ukungakhethi, ukwethembeka, isibindi ... Ngamafuphi, Folk yezinganekwane izingane - "uthisha" emangalisayo. A bushelelezi inkulumo kulinganiswa yemlandzi - Kujabulisa ngempela ngokuba imvuthu. By the way, eyisihlanu yobudala ingane ngokuvamile osaziyo eziningi Folk yezinganekwane. Sekuyisikhathi uqhubekela kombhali ...
Tales ngoba ingane iminyaka 5 ubudala - njengoba kufanele?
Ngakho lokho akusho ukhetha? A option enhle, isibonelo, kuyoba Pushkin sika inganekwane izingane. Basuke kahle benamandla yiphupho lenjabulo womuntu, izimangaliso ezihlukahlukene magic.
Pushkin sika inganekwane izingane okudaliwe okumangalisayo lokhu buchopho. Ayakujabulela ingane, kusinike ithuba ukhulume okuhle nokubi, entrain a ukufinyelela ukuthi bekuyoba ngokuphelele kungenzeki ...
Tales ulalele konke
Ngakho lena indlela enhle ukujabulisa izingane. Tales ngoba ingane iminyaka 5 ubudala ukutshela yonke indawo - ekhaya izinkulisa, kanye nezinye izikhungo ekhethekile pre-school. Ukuze wenze lokhu, abadala kudingeka kuphela eyolanda ncwadi. A ezihlukahlukene inganekwane ingane iminyaka 5 ezinyatheliswa namuhla ngamanani amakhulu, njengoba ngaphandle kwabo kuyoba nje ebuntwaneni bancishwa okuthile okubalulekile. A izithombe oyingqayizivele enhle zidonse ukunaka kwanoma abantabakho.
Yiqiniso, yezinganekwane ezilotshwe encwadini, naye walondolozwa ukuze izizukulwane ezizayo. Bayokujabulela ukulalela nabazukulu bakho, kanye nezingane zabazukulu. Nokho, izingane ziye zalahlekelwa kakhulu, uma okungenani kanye ngeke ukulalela le Umxoxi okhokhelwayo. ukusebenza yabo amashuni oyingcweti, mbumbulu nesiyaluyalu esaba khona izinyoni, nezilo zasendle, bakhale futhi ukuduma emifuleni entabeni ngeke imvuthu kuya injabulo ephelele. Ukulalela umxoxi, wena ukuwela okuthiwa eyodwa-umlingisi uzothola injabulo yangempela.
Ubuciko ngamazwi kuphela hhayi
Phela, le indaba ngoba ingane iminyaka 5 - akuyona nje ukubonisa zezikhonzi zabo. Kufanele futhi zihlanganisa ukuthinta, ukucula, izakhi waseshashalazini of the game. Ngelilodwa nje, indaba kuyinto art multi-ucezu elinothisa into entsha umlandzi ngamunye okungcono ithalente lakhe. izilaleli Small ngenjabulo enkulu wamthuma imihlaba bemilingo egcwele uhambo. Ziyakwazi emangalisayo ikwazisa izindaba okungavamile ukutshela ...
izindaba zezingane - kuyinto umhlaba wonke
Epholile izwi nogogo noma umama izingane mayelana yegolide, noma Tsar Saltan ... Eqinisweni, indaba ngoba ingane iminyaka 5 ubudala - kuba umhlaba wonke.
Yiqiniso, ngeminyaka, bafundzi bacala kuvisisa ukuthi izinhlanzi akakwazanga ukwakhela izigodlo okunethezeka isalukazi, amaqhawe amathathu, eliholwa umalume Chernomor awukwazi ukuphuma emanzini, futhi cap lobumnyama egqoka ababoshiwe ULyudmila, alikho.
Kodwa eqinisweni, imihlaba fabulous bahlale besondelene. Abanaso fade futhi musa fade. Vele thatha incwadi nge ayizintandokazi zabo inganekwane. Ingane iyajabula ukukhumbula ngenhliziyo!
Into ebalulekile ekuthuthukisweni kanye nemfundo
Okubaluleke ngaphezu zezingane inganekwane? 5 iminyaka - yobudala lapho ingane iba ukwazi okwengeziwe. Izingane ziyakuthanda ukufunda kabanzi mayelana nezwe elibazungezile. Inganekwane siyizisebenzi oluhle kakhulu ekwenzeni lokhu! Yiqiniso, ziqukethe izimangaliso magic, Nokho, akulona iphuzu.
Umqondo cishe njalo indaba kuyinqobo okuhle phezu kokubi. Nakani yakho yokuthi, kulobu budala, izingane okukhona nozwela. Kungakanani izingane bayajabula ekupheleni, lapho nalezo zelelesi bejeziswa!
Yiqiniso, futhi ngempela enesiphetho esijabulisayo akwenzeki kuwo wonke inganekwane. Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, okungenani umlando Bun. Fox sidla protagonist. Noma kunjalo, ingane iqala siqonde ukuthi kungani lokhu kwenzekile. Ngemva Bun kufanele asolwe yena - kumkhulu nogogo nakubazali ukushiya akuzange kudingeke ukuba!
By the way, izazi zokusebenza kwengqondo yezingane egqanyisiwe yokuthi izingane ngokuvamile ukubekezelela izenzo nobunjalo izinhlamvu. Ngokulandelana, asondele kakhudlwana ukuze izimfanelo ezinhle - ukukulungela ukophula, nomu- sa.
Funda kabanzi bese utshele!
Kunezindaba abathandwayo izingane eminyakeni 5, abazali ivame futhi audiovide. ziklabalasa, njengoba umthetho, okuhle kakhulu. Ikakhulukazi abadala akanayo ukuchitha zabo khulula isikhathi sokufunda. Noma kunjalo, kukhona eziningana agumenti esiphoqayo e esivuna ukufunda izindaba izingane ngabantu abadala bebodwa.
Kufanele uqale neqiniso lokuthi umuntu angakhetha - ingxoxo nomngane noma ukuphila izwi akhe alotshwe ku-the machine ophendulayo? Yiqiniso, inketho kuqala.
Ngaphezu kwalokho, uma ufunda indaba ingane wena, wena musa ukuvele utshele kuye kwenye indaba ethakazelisayo. Wena naye ngesikhathi esifanayo wokukhulumisana. Kungase kudingeke uchaze kuye incazelo yezinye amagama angajwayelekile. Sirekhoda ingane ngeke ukwazi ukuba babuze miphi "indlu Bast" noma "phansi umgqomo, okuyinto kudingeka ekuqaleni."
Ngaphezu kwalokho, abazali abaningi yesimanje ngokuvamile bakhononda ngokuthi izingane zabo abafuni ukufunda. Ngokwemvelo, ngeke uthanda incwadi, ngoba abazali zawo zazingazange zigonywe nakanjani umuntu abe nothando ukufunda kusukela zisencane.
Kafushane, umuntu omdala kumele kukhunjulwe ukuthi isikhathi esichithwa kubo kwi computer noma ubuka ithelevishini, kungaba kwenziwe ngendlela ehlukile. Akubuzwa ingane yakho noma wena ukuthi ukhathele futhi ekhathele. Kuyinto umuntu omthandayo - ukumkhokhela isikhathi esincane. Lezi aphansi imizuzu engamashumi amathathu ibaluleke kakhulu imvuthuluka.
A ezihlukahlukene inganekwane
Yiqiniso, izingane zilungele ulalele ibhuku lakho olithandayo yazo zonke izikhathi. Nokho, ekugcineni, kungase kancane unesizungu (ikakhulukazi abazali). Kulokhu, sekuyisikhathi sithathe into entsha. Yini kahle hle?
Yiqiniso, zonke izingane zihlukile. Stories for Boys iminyaka 5 Ngokwesibonelo, ungakhetha ezamehlela esitimela, ezindizeni noma imishini. Namuhla emashalofini ezitolo ezidayisa kukhona zingaphezu kokwaneleyo. Girls ukuzwa izindaba ezimnandi izilwane noma mayelana izigodlo nezingadi amakhosazana. Nokho, kukhona ezinye izincwadi ezidumile cishe zonke izingane, ngaphandle kokukhetha.
Kwenta sibonelo, bafundzi kakhulu othanda inganekwane evesini futhi kulula ukuba bakhumbule. Ngakho, ngeke nje bajwayelane ezweni ingane nekujabulisa kuye. Imvuthu oyinikezayo ithuluzi sokuthuthukiswa inkulumo, ukuzwa kanye inkumbulo onesigqi. Lapha futhi ewusizo zamaqhawe Pushkin. Kukhona futhi imisebenzi amahle kusukela UKorney Chukovsky, Samuil Marshak, Agnes Barto nezinye abalobi.
Uma ingane yakho ine bakhetha temibhalo yephrozi netindzaba - sebephendukela kuya zamaqhawe Charles Ipeni, i-Brothers Grimm, Hans Christian Andersen. Esinye sezipho ezinhle kakhulu Russian abalobi yezingane Eduard Uspensky. Izingane ukuzwa izindaba, esekelwe okuyinto efana opopayi emangalisayo zadalwa.
Kafushane, uhlu alupheli. izwe enothe inganekwane. Kodwa okubaluleke kakhulu - izindaba zabo ulula nokucacile iyiphi ingane. Zinikeza nyenti izingqondo zabo kancane. Izingane bacabanga - kungani kubalulekile ukuba senze kanjalo, hhayi ngenye indlela. Ngenxa yokuthi abazali bangasebenzisa inganekwane ngisho zixazulule ezinye zezinkinga lemfundo!
Toy-indiza: injabulo izingane nabazali
Ukukhokhwa Zokubeletha 2011: I-New Amathenda
Amakalishi Anex: ikhasimende izibuyekezo onobuhle ezahlukene
Ukugeza nosana: imithetho imphendvulo lesebaleni kodvwa lebalulekile
Izici izingane lokhuni sika ujantshi Brio
Georgi Vasilev: lokusungula kanye biography
Roses kusukela amahlamvu e-maple nezinye yezandla
"Batman: Arkham City": ukudlula lokuzula emhlabeni amageyimu
Adidas Zx 700 - izicathulo ngaso sonke isikhathi
Imisipha dystonia: ukuxilongwa ngesikhathi esifanele - isinyathelo sokuqala ekululameni
Labathaki bamafutha Ukhonkolo yesenzo ophoqelelwe ngezandla zakhe: Imidwebo
'Art TSifran' ezifeni
Sobumba - Iyini? Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini zobumba zobumba?
Van Gogh: igama nencazelo
Sihlela iholide ngemoto ukuya Anapa
Minnow - ukudoba kancane, kepha ohlakaniphileyo